Qaraxyo Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Baay. – Calamada.com
Qaraxyo Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Baay.
Ilaa iyo labo qarax ayaa la xaqiijiyay in saacadihii lasoo dhaafay kolanyo ka tirsan Kufaarta Xabashida Itoobiya lgula beegsaday qeybo ka mid ah gobalka Baay ee dhaca dhanka Konfur Galbeed ee dalka Somali.
Qaraxyada oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago ayaa ka kala dhacay duleedyada degmooyinka Diinsoor iyo Qansaxdheera ee gobalka Baay.
Qaraxa ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ayaa la xaqiijiyay in miinada ay haleeshay islamarkaana burburisay Gaari Uuraal ah’sidoo kale qaraxa waa baqti iyo dhaawac ku noqday askartii Xabashida Itoobiya ee gaariga burburay la socday.
Sidoo kale qaraxa labaad ayaa ka dhacay duleedka degmada Qansaxdheera waxaa lala beegsaday kolanyo Xabashi Itoobiyaan ah oo usoo socday kolanyada qaraxa lagula beegsaday duleedka degmada Diinsoor.
Si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha nafeet iyo midka hantiyadeed ee askarta Xabashida Itoobiya kasoo gaartay qaraxa lagula beegsaday duleedka Qansaxdheera sababo ku aadan isgaarsiintii degmada oo Xabashida Itoobiya hawada ka saartay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in labada kolanyo Itoobiyaanka ah ee qaraxyada lagula beegsaday duleedyada Diinsoor iyo Qansaxdheera iney doonayaan in sahay kala qaataan.
Kufaarta iyo Murtadiinta ayaa ku dhib qaba isticmaalka wadooyinka isku xera degmooyinka iyo deeganada ay duulaanka kaga suganyihiin Konfurta iyo bartamaha dalka Somali.
Previous: Dhageyso Shisheeyaha Oo Dad Shacab Ah Madaafiic Ku Garaacay.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Idaacadda Andalus 04-01-1438 Hijri.